Shiinaha Arag-Thru / Laba-Jidka Muraayadda Muraayadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Donghua
Muraayadda loo yaqaan 'Acrylic Two-Way Mirror', oo mararka qaar loogu yeero aragga, ilaalinta, muraayadda ama hal-dhinac muraayad ah. Muraayaddan gaarka ahi waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku dhex aragto adigoo weli iftiiminaya iftiinka gadaal. Loogu talagalay kormeerka, codsiyada gaarka ah, Dhua See-Thru / Labo Way Acrylic Mirror waa xulasho habboon.
• Waxaa lagu heli karaa xaashiyaha 1220 * 915mm / 1220 * 1830mm / 1220x2440mm
• Lagu heli karo midab ahaan
• Cabbirka gaarka ah iyo dhumucdiisaba sidoo kale waa la heli karaa
Muraayada loo yaqaan 'Acrylic See-Through Mirror', Eeg-Thru/ Thoog-Way Mkhaldan Amacaan Sheet
Muraayadda loo yaqaan 'Acrylic Two-Way Mirror', oo mararka qaar loogu yeero aragga, ilaalinta, muraayadda ama hal-dhinac muraayad ah. A muraayad laba-gees ah oo loo yaqaan 'acrylic sheet' waxaa loogu talagalay filim badh-hufan ah oo ku saabsan acrylic, oo u oggolaanaya qaddar yar oo iftiinka dhacdada ah oo ka tarjumaya inta hartay. Sida dhammaan acrylics, xaashidan si fudud ayaa loo goyn karaa, loo samayn karaa loona samayn karaa.
Magaca badeecada Muraayadda loo yaqaan 'Acrylic See-Through Mirror', Warqadda loo yaqaan 'Thrulic / Two-Way Mirror Acrylic Sheet'
Midab Cad ama midab
Cabir 1220 * 915mm, 1220 * 1830mm, 1220 * 2440mm, caado goyn-ilaa-size
Codsiga Kormeerka, amniga, xeryaha xoolaha
Laba-dhinac ama u fiirso-muraayadaha acrylic waxay leeyihiin codsiyo iyo faa'iidooyin kala duwan. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha loo dhexgaliyo xaashida acrylic-ka laba-geesood ah meheraddaada ama gurigaaga.
2 dariiq oo xaashida muraayadda loo yaqaan 'acrylic mirror'
acrylic 2 way muraayad
acrylic 2 way muraayad sheet
muraayadda looxa laba dhinac
muraayad loo arko acrylic
acrylic two way muraayad
xaashiyaha loo yaqaan 'acrylic two way mira' sheet
muraayad laba dhinac ah
laba hab muraayad akril